Raadinta waayo-aragnimada madadaalo iyo faa'iido leh ee qoyska xagaagan? Wax ka baro Xagaaga dhoola cadeynta - Cunnooyinka Lugaha
Raadinta madadaalo qoys iyo waayo-aragnimo waxtar leh xagaagan? Baro Xagaaga Dhoolacadeynta
Cusboonaysiinta: Xagaaga ee Dhoola Cadeynta Bulshada iyo qaddarinta mutadawiciintu waa 2-4 galabnimo Sabtida, Ogast 16, markay tahay Bryant Square Park, 3101 Bryant Ave. S., Minneapolis. Halkan riix si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Xagaagu waa xilli xusuus la sameeyo. Maalmuhu waa dheer yihiin, dugsiguna wuxuu ku jiraa dib-u-eegista, badiyaaana waxaa jira waqti yar oo dheeri ah oo loogu talagalay howlaha qoyska. Haddii aad raadineyso hab abaal-marin dheeri ah oo aad waqti ku wada qaadataan xagaagan, Cunnooyinka Kabaha Cagaaga ee Dhoola-caddeynta ayaa kugu habboon adiga.
Waxaan ugu baaqeynaa qoysaska inay si wadajir ah iskudayaan iskudayada cunnada, waxaanan siineynaa dhammaan noocyada agabyada waxtarka leh ee kaa caawin doona inaad sida ugu wanaagsan uga faa'iideysato howshan. Kaliya maahan inaad fursad uhesho inaad ku dhisto hawshan fulinteeda ah jadwalkaaga xagaaga, laakiin waxaad heli doontaa inaad nagala soo qayb gasho soiree-dhamaadka xagaaga oo aad sheekooyinkaaga kula wadaagi karto qoysaska kale, oo aad fursad uheli karto inaad tirada abaalmarino waaweyn.
Waxaan dejinay lix talaabo oo fudud kuwaas oo naga caawin doona hubinta khibrad gaarsiinta xagaaga.
Bilaabidda xagaaga ee Dhoolacaddeynta waa sahlan tahay. Kala Xiriir Cuntada Wheels Tabaraha Tabaruce Emily Lund at [email protected] ama adiga oo waca 612-623-3363.
Mention garee inaad u yeeraysid xagaaga ee Dhoollacadeynta iyo Emily waxay kaa caawin doontaa inaad kugu hagto Cunnada xaafaddaada ee goobta Wheels, iyo sidoo kale inaad ka jawaabto wixii su'aalo ah ee aad qabto. Waxay sidoo kale awoodi doontaa inay kugu hagto ilaha dheeraadka ah ee aad ka heli karto waxtar inta khibraddaada gaarsiinta. Waxaad sidoo kale iska qori kartaa cusbooneysiinta emaylka gaar ahaan xagaaga ee Dhoolacadeynta xagaaga oo dhan:
Ku soo biir Xagaaga Dhoolacadeynta
2. Si wada jir ah wax u aqriso si aad ugu diyaargarowdaan khibradda gudbinta cuntada.
Bixinta Cunnooyinka Dufanku waa fursad iskaa wax u qabso ku habboon carruurta da 'kasta leh. Waad ugu boodi kartaa si toos ah dhalmada hadaad jeceshahay, laakiin inaad wax si wada jir ah wax u wada siiso ayaa sidoo kale ah fursad weyn oo caruurtaada lagu bari karo tabaruca iyo caawinta waayeelka iyo dadka naafada ah ee ka tirsan bulshadayada.
Waxaan diyaarinay liis akhris ah oo kaa caawin kara inaad u diyaar garowdo gaarsiinta oo aad bilowdo wadahadal feker leh oo ku saabsan qaar ka mid ah arrimaha aad kala kulmi karto intaad socoto. Waa kuwan liistada buugaagta carruurta ee taabanaya arrimaha isir-dhexaadka ah qaab feker leh oo ka caawin kara carruurtaada fahamka gabowga:
Maalin xanuunsan Amos McGee waxaa qoray Philip C. Stead
Miss Tizzy waxaa qoray Libba Moore Gray
Wilfrid Gordon McDonald digaagduur waxaa qoray Mem Fox
Mrs. Katz iyo Tush by Patricia Polacco
Albert Ninka Fix-it by Janet Lord
Wada Jir Wanaagsan: Baro oo Milicso - Waayeelka iyo Gabowga
Lindsey McDivitt ee Kheyraadka isirka
Waxbarashada Bulshada ee Ku Saabsan Gabowga Isbedelka (SEAChange) Liiska buugga
3. Kala hadal habka dhalmada carruurtaada
Haddii ilmahaagu u diyaarsan yahay waayo-aragnimada iskaa-wax-u-qabso, waxaad u badan tahay inaad baashaashid oo aad naftaada u raaxaysatid. Waa kuwan talooyin dheeraad ah oo ku saabsan diyaarinta:
Ilmahaaga kala hadal noocyada kala duwan ee dadka ay u badan tahay inaad la kulanto. Qaar ka mid ah dadka waawayn waxay noqon karaan kuwo saaxiibtinimo leh oo hadal badan. Kuwa kale ma rabi doonaan inay ku soo booqdaan. Qaarkood waxay noqon doonaan waayeel, halka qaar kalena ay jiran yihiin ama ay itaal daran yihiin.
Ka hadal noocyada kala duwan ee guryaha iyo guryaha aad arki doontid. Qaarkood way yaryihiin kuwa kalena way weyn yihiin. Qaarkood waxaa laga yaabaa inay qasan yihiin ama xitaa ur xun.
Haddii aad leedahay ilmo yar, ku tababar inaad albaabka ka garaacdo guriga oo aad ku dhahdo (cod dheer) "Cuntada Lugaha Lugta." Sidoo kale, waxay kuxirantahay da'da ilmahaaga, waxaad ubaahan kartaa inaad si tartiib tartiib ah ubixiso cuntada.
Sharax in marka aad garaacdo albaabka ama aad garaacdo aad u weyn tahay, in aad xoogaa sugto. Qaatayaasha qaata wakhti dheer ayey ku qaadataa inay albaabka ka soo galaan. Kala hadal cunugaaga muhiimada uu leeyahay samirku.
Ka gudub qawaaniinta aasaasiga ah ee aadaabta, sida salaanta marka aad timaaddo, macsalaameynta markii aad baxdo.
Sharax in odayaasha qaarkood ay maqalku ku adkaan karo. Xusuusi ilmahaaga inuu si tartiib ah iyo cod dheer ugu hadlo kuwa cuntada qaata inay maqlaan.
Ka hadal xaqiiqda tan iyo markii aad isdiiwaangelisay dariiqa, dadka waaweyni way kugu kalsoon yihiin. Markaa xitaa haddii aad doorbidi lahayd inaadan maalin uun aadin - maxaa yeelay waa qabow iyo roob ama waxaad ku raaxeysanaysaa inaad la ciyaarto saaxiib - waa muhiim inaad raacdo ballanqaadkaaga. Tani waa fursad weyn oo aad ku yeelan karto wadahadal ku saabsan mas'uuliyadda.
4. Sii cuntada
Hadda waxaa yimid qaybta xiisaha leh! Mar alla markii aad garatid dariiqa, tixgeli inaad ku sii socoto wadada hal mar kaligaa si aad u sharaxi karto sida saxda ah waxay noqon doontaa ka hor intaadan bilaabin. Tilmaamo dheeri ah oo ku saabsan gaarsiinta qoys ahaan waxaa laga heli karaa bartayada bogga tabaruca qoyska.
5. Ka fikir khibradahaaga
Waad kala hadli kartaa ilmahaaga wax ku saabsan waxa aad ka caawinayso bulshada dhexdeeda. Milicsiga wuxuu kobciyaa horumarka fikirka xasaasiga ah ee carruurta wuxuuna kicin karaa xoogaa wadahadal xiiso leh.
Tixgeli su'aalahan si aad ugu booddid wadahadalka:
Maxay muhiim u tahay inaan cunno u keeno waayeelka iyo dadka naafada ah ee ku nool beesheena?
Sideed maanta isbedel ku sameysay?
Ma jiraan wax kaa yaabiyay? Hadday haa tahay, waa maxay?
Ma jiraan wax dhacay oo kaa dhigay inaad dareento raaxo la'aan?
Maxaad ka baratay keenista cuntada ee aadan horay u aqoon?
Maxaad ugu jeceshahay keenista cuntada? Waa maxay qaybta ugu adag?
Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha xiisaha leh ee aad uga caawin karto carruurtaada inay duubtaan khibradooda:
Samee joornaal ama buug yar oo ku saabsan cuntooyinkaaga 'Wheels adventures'. Waxaad ku dari kartaa xigashooyin, sawirro, xusuus-qoryo iyo qoraallo joornaal ah. Ku dar wax cusub markasta oo aad tabarucdo.
Si wada jir ah u qor oo u sharrax buug ku saabsan khibradaada bixinta, iyada oo ilmahaagu yahay astaamaha ugu weyn. Waxaad ku dari kartaa sawirro ama sawirro.
Qor cunuggaaga warqad u qor qof (ayeeyo, eeddo, saxiib) wixii ku saabsan khibradaada. Ama cunugaada ha ku sharraxo waayo-aragnimada qof taleefanka kula jira.
La wadaag cuntadaada sheekada Wheels boggayaga internetka.
6. Dabaal deg oo la wadaag sheekadaada qoysaska kale
Nagala soo qaybgal dabaaldeg iskaa wax u qabso dhammaadka xagaaga. Dhammaan qoysaska kaqeyb gala Xagaaga Dhoolla-cadeyga ayaa heli doona casuumaad xafladda. Qof kasta oo yimaada wuxuu fursad u helayaa inuu la wadaago sheekooyinka gudbintooda waxaanan keeni doonaa cuntada iyo abaalmarinno xiiso leh.
Laga yaabaa 21, 2014